स्थानीय सरकारको डेढ वर्षः गाडी किन्नमै ११ करोड खर्च, यस्तो छ विवरण ! | suryakhabar.com
सञ्चार क्षेत्र राज्यबाट असुरक्षीत छ भन्नु गलतः मन्त्री अर्याल
पेट्रोलियम पाइपलाईनको मङ्गलबार प्रधानमन्त्री ओली र मोदी उद्घाटन गरिने
नेपाल–चीन परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय वार्ता शुरु, समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुने
Home पु.समाचार स्थानीय सरकारको डेढ वर्षः गाडी किन्नमै ११ करोड खर्च, यस्तो छ विवरण !
स्थानीय सरकारको डेढ वर्षः गाडी किन्नमै ११ करोड खर्च, यस्तो छ विवरण !
on: May 24, 2019 In: पु.समाचारTags: No Comments
डोटी । जिल्लाका नौ वटा स्थानीय तहले डेढ वर्षको अवधिमा गाडी खरिदमा झण्डै ११ करोड खर्च गरेका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचन भइसकेपछि २०७४ साउनदेखि २०७५ चैत महिनासम्मको अवधिमा रु १० करोड ९३ लाख ८६ हजार ८२९ रुपैयाँ गाडी खरिदमा खर्च गरिएको छ । गाडी खरिदमा सबैभन्दा धेरै खर्च पूर्वीचौकी गाउँपालिकाले गरेको पाइएको छ । यो गाउँपालिकाले दीपायल सिलगढी नगरपालिका भन्दा रु १ करोड ६० लाख ६८ हजार १६३ रुपैयाँ बढी खर्च गाडी खरिदमा गरेको छ ।
त्यसैगरी, शिखर नगरपालिकाले रु १ करोड ५४ लाख २९ हजार ३०० रुपैयाँ खर्च गरेर विभिन्न गाडी किनेको पाइएको छ । दुई वटा नगर बसमा रु ५६ लाख ६० हजार, टिपरमा रु ३८ लाख ६९ हजार, जीपमा रु ३६ लाख ९५ हजार, ८ वटा मोटरसाइकलमा रु २० लाख २६ हजार ४०० र एउटा स्कुटरमा रु १ लाख ७८ हजार ९०० रुपैयाँ खर्च भएको देखिएको छ । दीपायल सिलगढी नगरपालिकाले रु १ करोड ६ लाख ८७ हजार ४८९ रुपैयाँ खर्चेर गाडी खरिद गरेको छ ।
यस नगरपालिकाले रु ३४ लाख ८ हजार ६५० रुपैयाँमा १५ मोटरसाइकल खरिद गरेको पाइएको छ । त्यस्तै, दुई नगर बसमा रु ५१ लाख ९० हजार, एउटा ट्याक्टरमा रु १६ लाख ३८ हजार ८८४ रुपैयाँ र सक्सनम ट्यांकमा रु ४ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । पूर्वीचौकी गाउँपालिका, शिखर नगरपालिका र दीपायल सिलगढी नगरपालिकाले समान दुई–दुई वटा बस खरिद गरेका छन् । तर, पूर्वीचौकी गाउँपालिकाले दीपायलको भन्दा बसमा रु २९ लाख ८६ हजार रुपैयाँ बढी खर्च गरेको देखिएको छ । दीपायल सिलगढी र शिखर नगरपालिकाले खरिद गरेका बसको मूल्यमा रु ४ लाख ७० हजार रुपैयाँ अन्तर देखिन्छ ।
उता, जोरायल गाउँपालिकाको गाडी खरिदमा अन्य स्थानीय तहभन्दा खर्च कम भएको देखिन्छ । यस गाउँपालिकाले रु ५८ लाख ३८ हजार ९९९ रुपैयाँ गाडी खरिदमा खर्च गरेको देखिन्छ । जोरायल गाउँपालिकाले दश वटा मोटरसाइकल खरिद गरेको छ जसका लागि रु २२ लाख ८ हजार ९९९ रुपैयाँ तिरिएको छ । यसैगरी, एउटा महिन्द्रा पिकअप जीपमा रु ३६ लाख ३० हजार रुपैयाँ खर्च गरिएको छ ।
आदर्श गाउँपालिकाले डोटीका स्थानीय तहहरुमध्ये मोटर गाडी खरिदमा सबैभन्दा कम खर्च गरेको छ । उसको खर्च रु ५७ लाख २२ हजार ९०० रुपैयाँ देखिन्छ । चौध वटा मोटरसाइकल खरिदमा रु ३३ लाख ३७ हजार ९०० र एउटा महिन्द्रा बोलेरो जीप खरिदमा रु २३ लाख ८५ हजार रुपैयाँ खर्च देखाइएको छ । जिल्लाका नौ स्थानीय तहमा यो डेढ वर्षको अवधिमा ९१ मोटरसाइकल भित्रिएका छन् । सबैभन्दा बढी केआईसिंह गाउँपालिकाले १७ वटा र सबैभन्दा कम सायल गाउँपालिकाले ३ वटा मात्रै मोटरसाइकल किनेका छन् ।
स्थानीय तहले खरिद गरेका दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनहरुको मूल्यमा भने एकरुपता छैन । एउटै कम्पनीको एकै मोडल र एकै क्षमताको मोटरसाइकल पनि फरक–फरक दरमा खरिद गरिएको पाइएको छ । नगरपालिका तथा गाउँपालिकामा खरिद भएका यस्ता मोटरसाइकलको दुरुपयोग भइरहेको पाइएको छ । स्थानीय तहसँग असंलग्न व्यक्तिहरुले पनि ती मोटरसाइकल चलाउने, एउटै मोटरसाइकलमा एकैपटक तीन जना चढ्न दिने र बिदाको दिन पनि सवारी साधनहरु चलाउने गरेको स्थानीय बासिन्दाको आरोप छ ।
कतिपय ठाउँमा अनुमति पत्र नभएकाहरुले समेत मोटरसाइकल चलाउने गरेका छन् । स्थानीय तहका सवारी साधनहरुको प्रभावकारी अनुगमन नहुँदा जनप्रतिनिधिहरुका आफन्त र कर्मचारीका परिवारजनले विवाह, मेला र भोजभतेरमा समेत सरकारी सवारीसाधन प्रयोग गर्ने गरेको जनगुनासो छ । उता, यहाँका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले स्थानीय तहमा आवश्यक परेका कारण चाहिएका गाडी मात्रै खरिद गरेको दाबी गरेका छन् ।
मुक्तिनाथ विकास बैंकको नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा बज्राचार्य
सिभिल बैंकको शाखा अब अर्जूनधारामा
सकारात्मक सोचले नै मुलुकको परिवर्तन सम्भव: विश्वास
मुक्तिनाथ विकास बैंकद्वारा कालीकोटको स्कुललाई तीन लास छात्रवृत्ति सहयोग